Golaha wakiilada Puntland oo wax ka badaley dastuurka, ansixiyey, kana doodaya heshiiska macaadinta, shidaalka & khayraadka. – Radio Daljir
Golaha wakiilada Puntland oo wax ka badaley dastuurka, ansixiyey, kana doodaya heshiiska macaadinta, shidaalka & khayraadka.
Garowe, Ddec 19 – Mudanayaasha baarlamaaknka Puntland ayaa fadhigoodii maanta ka dooday dasturka cusub ee Puntland, kuna sameeyey is-badel basiid ah dastuurka cusub, intaa kadibna ansixiyey.
Fadhiga golaha ee maanta oo ay fadhiyeen 60 mudane oo ka mid ah 66-ka mudane ee golaha ayaa todobaadakii la soo dhaafay ka doodayey qodobo ay ka mid yihiin dastuurka, xisaab-xirka 2009, miisaaniyada dawlada ee 2010, dhismaha guddiga doorashada, shuruucda axsaabta iyo shuruuc hoosaadka golaha.
Golaha ayaa sidoo kale ka shiraya heshiiska ay xukuumadu dhawaan la gashay shirkada AfricaOil oo nuqul ka mid ah heshiiska ay xukuumadu u gubisay guddoonka golaha.
Mudanayaasha golaha ayaa sidoo kale lagu wadaa in ay ka doodi doonaan calanka, astaanka iyo heesta dawlada Puntland, marka uu meel mariyo guddiga astaynta ee ay xukuumadu u xil saartay.
Sida sharcigu dhigayo dastuurka cusub ayaa ay tahay in shacabka loo soo bandhigo, aftina loo qaado saanad ka hor waqtiga xukuumada iyo baarlamaanka.
Afhayeenka baarlamaanka Puntland Md. C/rashiid M. Xisri oo ka hadlay dastuurka cusub ayaa sheegay in 57 ka mid ah mudanayaashu ay u codeeyeen ansixinta dastuurka, halka 3-na ay diideen ama ka aamuseen.
Dastuurka cusub ayaa badeli doonii kii hore ee Puntland lagu aasaasay 1998-kii, dhawr jeer oo horena wax laga bedalay.